ट्रम्पको गो’प्य रुपमा को’रोना परिक्षण गरेको खुलासा, आयो यस्तो रिपोर्ट आएपछि विश्व नै चकित ! – Aaj ko Sandesh
मुख्य पृष्ठ /News/ट्रम्पको गो’प्य रुपमा को’रोना परिक्षण गरेको खुलासा, आयो यस्तो रिपोर्ट आएपछि विश्व नै चकित !
ट्रम्पको गो’प्य रुपमा को’रोना परिक्षण गरेको खुलासा, आयो यस्तो रिपोर्ट आएपछि विश्व नै चकित !
एजेन्सी । अमेरिकाका राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पको गो’प्य रुपमा को’रोना परिक्षण गरिएको खुलासा भएको छ । परिक्षणमा रिपोर्ट नेगेटिभ आएपछि ट्रम्प आफैले यसको खुलासा गरेका हुन । मिशिगनमा एक अटोमोटिव प्लान्टको यात्रामा जानुअघि पत्रकारसँग कुराकानी गर्दै उनले यस्तो कुरा बताएका हुन । उनले पत्रकारलाई आफ्नो को’रोनाको परीक्षण भएको जानकारी दिए । परीक्षणको नतिजाबारे बताउँदै उनले भने, ‘मेरो को’रोनाको परीक्षण सकारात्मक रुपले नकारात्मक आएको छ ।’ उनले थपे, ‘निकै सकारात्मक परीक्षण भयो । आज बिहान मैले नेगेटिभका लागि सकारात्मक रुपले परीक्षण गरेँ ।’
‘ठिक छ, आज बिहान मेरो पूर्ण रुपमा परीक्षण भयो । अर्थात्, मेरो परीक्षण नकारात्मक आयो ।’ ट्रम्पले शुक्रबार फोर्ड कारखानाको अवलोकन गर्नेछन् जसले भेन्टिलेटर्स बनाइरहेको छ । यो हप्ताको सुरुमा कम्पनीका प्रवक्ताले यो भ्रमणका बेला राष्ट्रपतिले मास्क लगाउनुपर्ने बताएका छन् । को’रोनाभा’इरस म’हामारी सुरु भएदेखि अहिलेसम्म ट्रम्पले मास्क लगाएको देखिएका छैनन् ।
ह्वाइट हाउस कर्मचारीका केही सदस्य कोरोना ‘भा’इरसद्वार सं’क्रसमत पाइएका छन् जसका कारण ट्रम्प र उप–राष्ट्रपति माइक पेन्सको दैनिक परीक्षण भइरहेको छ । बीबीसीबाट
श्रीमती ह’त्या गरेका रञ्जन घटनाले लियो यस्तो नयाँ मोड
अछामकि श्रीषा रावललाई बचाउन परिवारद्वारा आर्थिक सहयोगको अपील !!